बन्ने भो फिल्म ‘मेरी मामु’, को हुन् आयूबकी आमा बन्ने कुसुम ? – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentबन्ने भो फिल्म ‘मेरी मामु’, को हुन् आयूबकी आमा बन्ने कुसुम ?
निर्माता सन्तोष सेनले फिल्म ‘मेरी मामु’ निर्माण गर्ने भएका छन् । यसअघि सुपरहिट फिल्म ‘प्रेमगीत’ को दुई सिरिज निर्माण गरिसकेका सेनले आफ्नै ६ वर्षिय छोरा आयूब सेनलाई मुख्य रोलमा देखाउदैछन् । नामैले प्रष्ट पार्छ यो फिल्मले एक छोरा र आमाको कथा बोल्छ ।
६ महिना लामो अभिनय कोर्ष पश्चात् निर्माता सेनले छोरालाई फिल्ममा लिएका हुन् । याम थापाले निर्देशन गर्ने यो फिल्म असार ३ गतेबाट फ्लोरमा जाने निर्माण टिमको भनाई छ । आयूबकी आमाको भूमिकामा कुसुम गुरुङलाई अनुबन्ध गरिएको निर्माण टिमले जनाएको छ । कुसुमले यही फिल्मबाट नेपाली रजतपटमा डेब्यू गर्दैछिन् ।
आसुसेन फिल्मस् प्रालिको ब्यानरमा निर्माण हुने यस फिल्मका लागि कुसुमले राजधानीको एक थिएटरबाट अभिनयमा तीन महिने प्रशिक्षण लिइसकेकी छिन् । यसअघि उनले सुनिल पोखरेल निर्देशित ‘हरियो ढुंगा’ नामक नाटकमा अभिनय गरिसकेकी छिन् । निर्देशक थापा आफैंले लेखेकाो फिल्मको कथा बाल मनोविज्ञानमा आधारित रहेको छ । निर्माण स्रोतका अनुसार, फिल्म‘प्रेमगीत २’ पछि फिल्म दुनियाबाट टाढा रहेकी अभिनेत्री अश्लेषा ठकुरी पनि यो फिल्ममा देखिनेछिन् । केही दिन भित्रै फिल्मको विषयमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै कलाकार सार्वजनिक गर्ने तयारीमा निर्माता सेन रहेको बुझिएको छ । स्तरिय फिल्म निर्माण गर्ने सूचिमा दरिएका निर्माता सेन युवा स्टार प्रदीप खड्कालाई लिएर‘प्रेमगीत ३’ निर्माणको तयारीमा समेत छन् ।